Tottenham Oo Raaligalin Ka Bixisay Fariin Lid Ku Ah Liverpool Oo Twitter-keeda Lagu Baahiyey
HomeWararka MaantaTottenham Oo Raaligalin Ka Bixisay Fariin Lid Ku Ah Liverpool Oo Twitter-keeda Lagu Baahiyey
Naadiga Tottenham Hotspur ayaa degdeg u tir-tiray Fariin gaaban oo si jees jees ah loogu maagayay Liverpool ciyaartii xallay ay barbaraha la gashay Crystal Palace, Raali gallina ka bixisay falkaasi.
Naadiga woqooyiga London ka dhisan ee Spurs ayaa soo dhigay Twitter ka maqsinka ay ku leeyihiin , fariin loogu duur xulayo kooxda dhar casta in dhulka la jiid jiiday oo aanay lahayn awood ay horyaal ku qaadaan.
Fariintii ay soo dhigeen Twitter oo aanu muuqaal ka qabanayna waakan aanu halkan idiinku qaybinay , waxaanay ku qoreen ” Squawka Football tweeted a screenshot of the original tweet which read: “Xasuuq, hadana aad wax lagu maadsado ah. Is dhiibidii ugu weynayd tan iyo tii Newcastle ee 90 kii.”
Qoraalka ka sokow , waxay raaciyeen sawiro Video la isu keen keenay ah oo uu ka muuqdo , Kabtan Stefen Gerrard kulankii Chelsea kaga badisay Anfeild , goolkiii uu ku sinbiririxaday ee guuldarada u sabab ahaa.
Spurs ayaa fariintii iyo muuqaaladii la socdayba kaga masaxday Twitterkooda 8 daqiiqo markii uu ku jirayba , waxaanay soo dhigeen fariin kale oo ay kaga raali gallinayaan ficilkaasi kooxda Liverpool. waxa kale oo ay ku tilmaameen inaanay kooxda Tottenham ku shaqo lahayn soo dhigista Fariintaasi ee la jabsaday Bartooda twitter-ka.
“Waxaanu ka raali gallinaynaa cid kasta oo lagu aflagaadeeyey fariintii dhawaan la baahiyey, taasi oo si degdeg ah loo tirtiray (masaxay). Fariintan may ahayn mid ay direen cid hawl wadeen ka ah naadiga THFC (Tottenham Hot Spurs Footbal clubb).”
“Waxaa hadda uun nala soo daristay xaalad amni darro ah oo lagu jabsaday bartii rasmiga ahayd ee kooxdu ku lahayd Twitter.”
Wasiirka Dhallinyarada & Ciyaaraha Somaliland Oo Xilka U Kala Wareejiyay Hogaanka Cusub Iyo Hogaankii Hore Ee Xidhiidhka Kubadda Cagta + Sawirro
15/08/2016 Samatar Mohamed
Matthaus Oo Dhaleeceeyey Guardiola: ‘Halkani Maaha Barcelona.’